Namhlanje indawo yokunxibelelana iguqukela ngokwenene. Iindidi ezahlukileyo zezinto ezintsha ziza kuza, njengoko i-SDN kunye nefu ezitshintsha indlela indlela yokunxibelelana ihlanjululwe kuwo onke amabini eminyaka edluleyo. Kwimeko nayiphi na imeko, iCisco ibe yindawo ephakamileyo yemidlalo yokunxibelelana kwabanye, iminyaka emininzi. Akusebenzi nje kuphela oku kusebenza ekutshintsheni ubuso bakho kunye nendlela yokusekela, ukudibanisa nokuphuhliswa okunzulu okufana nokugxilwa kwedatha kunye nomzamo ohlangeneyo. I-80% yomnatha wehlabathi kunye ne-intanethi ziqhuba iCisco ifanelana. Kuhlala kulungele ukuzuza kwindlela yoovulindlela. Kukho ukuqinisekiswa kokunxibelelwano okungaqhelekanga apho, nangona kunjalo i-CCNA Security ibe yinjongo ephakamileyo kakhulu yomdlalo (i-IT certification) ixesha elide, elide. Kungakhathaliseki ukuba ungeke uqhube usebenzise i-cisco, uguqule ube yi-CCNA uza kwakha isiseko esicacileyo seengcamango ezinxibelelwano zisuka kwisigaba sokuqala.
Isikhokelo soKhuseleko seCCNA
Iimodyuli zezemfundo zeCACNA
Amanqaku anomdla weCCNA Certification
I-Cisco Certified Network Associate (CCNA) yimiqathango phakathi kweempawu zokubaluleka ze-IT eziqhelekileyo nakwezona zikhoyo namhlanje. Idata ibonisa ukuba i-1 yezigidi ze-CCNA zivunyelwe ngoku zivunywe ukusukela kwi-1998, xa iqala ukubonisa. I-CCNA ayisebenzisi kuphela kubasebenzi kunye nabafake izicelo ze-IT, ngokungezelelwe kubaphathi. Kucacile ukuba, i-CCNA isitifiketi sezokhuseleko sinamaphupha amakhulu anomdla. Ngandlela-ndlela ekufumaneni esi siqinisekiso ezininzi iingcali ze-IT zitshintshe ubomi bazo kwaye zifezekise iingcingo ezimbalwa. Kukho imimiselo apho iingcali ze-IT nakwixesha lokusebenza ixesha elide ziziva zifuna ukufumana izitifiketi ze-CCNA.
CCNA security training helps in giving understudies data and practice assignments to enable them to checking, arranging, and investigating fundamental errands of a Cisco WLAN in little to medium-sized business (SMB) and endeavor networks. It helps the hopefuls to build up the ideas and issues identifying with LAN/WAN connections. Different protocols including IP, IGRP, outline transfer, CLANXCHARXs, Ethernet, Serial, IP RIP, RIP, Access lists, and so on are likewise incorporated into this certification course. Take up any of the courses, which will prepare you to move to greener fields. Maybe you may enter a multibillion-dollar corporate and a fortune 500 associations. It is this sort of specialization that will separate you from the common IT work.
Uqeqesho lwesiseko seCisco luyi-standout phakathi kweeprojekthi ezithatyathwa kakhulu emhlabeni jikelele kunye namatye athile kulabo bantu abaneenjongo zeSilicon Valley. Ukwabelana ngeenkcukacha kule khosi yokunxibelelanisa ekufutshane nawe kwaye uvumele ukuba umsebenzi wakho uhambelane neziphumo ezintsha ezinokuqikelela.
I-CCNA isatifikethi sisiseko okanye isitifiketi sezinga leCisco CCIE. Ukufuna emva kweCisco CCNA isatifikethi kuya kukunceda ufezekise iingcali zakho kwaye ufezekise izikhulu. Ngaphandle kokubhalwa zimbalwa zeenzuzo zokufuna emva kweCACNA Course, qaphela -
Unokulindela ukunyuka kwisabelo sakho kwaye uhlawule kwimibutho yakho yangoku.
Unako ngaphandle kokulula ukutshintsha umsebenzi ocela ukunyuka kwintlawulo.
I-CCNA ibonakala kuyo yonke indawo kwihlabathi, oku kuthetha ukuba unako umhlaba ongaphaya kwimeko ephesheya.
Ukuzivocavoca ukuzivuma njengokuba iCCNA yimibuzo ye-IT ebunzima.
Ikholeji ye-CCNA iyakwenza isithuba semisebenzi eyahlukeneyo yokunxibelelana. Nangona kunjalo, ukhuphiswano luya kwaziwa ngokusemandleni kwintsimi yeCisco kunye nokutshintsha. Iingcali eziqinisekisiweyo zeCisco ziza kuba namandla okuloba nokuqhuba uxhumano lweendawo ezikude eziqhubekayo kwiWAN. Baye bahlaziywa ngolwazi olubalulekileyo malunga nombandela wokukhusela ukhuseleko lomnatha, ukuthungatha ii-PC ezikude kunye namanye amakhono e-PC.
I-Post culmination yakho ye-CCNA isatifikethi, ufaneleke ngokucacileyo kwiindawo ezahlukeneyo zengqesho. Ngaphandle kokubhaliweyo iifayile zakho zokuhlala eziqhelekileyo-
Nangona kunjalo enye inzuzo yeCACNA yinkqubo kukuba i-criteria yemigangatho efunekayo yinto ehambayo kwi-10 + 2 standard. Ukususela okweshumi elinesibini kudlulayo abantu abanomdla okwaneleyo kwintsimi yeenqununu kunye nentsebenziswano banokufuna i-CCNA ngaphandle kweqondo. Ngokufanayo, iinjongo zobungcali bezithemba ziya kuphuculwa ngekhosi yeziqinisekiso. Ngokufanayo, i-CCNA yindlela efunekayo yokufunwa emva kwezifundo ezahlukeneyo zokuqinisekisa iziqinisekiso zeCisco kuquka neCCIE. Abantu abasemashishini kwaye bafuna isatifikethi kwi-LAN / WAN nabo bathathe le khosi eya kubanceda ngenxa yokuqhubela phambili.
Kungakhathaliseki ukuba unjengokuqala kokuqala okanye ukuqhubela umsebenzi, imboni yokunxibelelana inikezele ngokubanzi indawo yokuphuhlisa umsebenzi. Kwixesha elidlulileyo uphuhliso lwezinto ezintsha, kuquka ezo imibutho kunye noorhulumente. Yonke inxibelelwano idinga abantu abaqeqeshiwe ukulawula imisebenzi kunye nenqabiseko. Icandelo lezentengiselwano liye lithe tye ngakumbi kwaye i-CCNA iqinisekisileyo iya kukunika ukuzaliseka kunye nokwazisa umsebenzi wakho we-IT.
IziCwangciso zeNkcazo zeNnovativeungumboneleli we-IT ukulungiselela imibutho ephezulu. Iyalathisa iingcali ukuba ziqulunqe iinkqubo zokukhusela kwiinkqubo ezixhunyiwe kunye neendawo ezahlukeneyo. Banika ukuqeqeshwa okumangalisayo kwi-CCNA kwiifisi.
I-CCNP yeSatifikethi seZatifikethi - I-Guide epheleleyo